Asa fanandevozana Betsaka ireo mbola miaina aminy eto amintsika
Betsaka ireo olona mbola miaina anaty asa fanandevozana eto amintsika. Ireo olona sahirana amin’ny ankapobeny no tena mahita faisana, toy ireo ankizy miasa an-trano tsy afa-mianatra intsony noho ny fahasahiranan’ireo ray aman-dreniny…
Ho an’i Niry, tovovavy kely iray miasa an-trano eny Atsimondrano eny dia nambarany fa vao 10 taona monja izy dia efa niasa taman’olona satria kamboty. Niainga tamina 5.000 Ar ny karamany ary tsy mihoatra ny 30.000 Ar mandraka ankehitriny. 16 taona izao i Niry. Tokantrano telo no efa noteteziny. Iray tamin’ireo ihany anefa no mba tsara fanahy, hoy izy, fa ny ankoatra izay dia tsy manome sakafo azy amin’ny alina sady tsy mampatory azy rehefa sendra marary ny zanaky ny mpampiasa. Mangidy ny tsy manana, hoy i Niry, saingy tsy maintsy mihafy. Amin’ny ankapobeny anefa dia tokony ho 155.523 Ar no karama farany ambany indrindra ho an’ny mpanampy an-trano, mpanao zaridaina ary ny receveur. Nankalazaina afaka omaly alarobia 20 febroary ny andro maneran-tany ho an’ny fitsarana ara-tsosialy. Nanomboka tamin’ny taona 2009 izy io no nankalazaina maneran-tany ka ny tanjona dia ny hahafahana miady amin’ny tsy fananan’asa sy ny fahantrana hanafoanana ny asa fanandevozana. Toraka izany koa ny fitsarana tsy mitanila, ny fitovian-jo ary ny fahafahana miteny sy maneho hevitra.